Air Canada Yakagadzirira Kubatanidzazve Canada neUS Iine Kusvika mazana maviri Nendege Ndege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air Canada Yakagadzirira Kubatanidzazve Canada neUS Iine Kusvika mazana maviri Nendege Ndege
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Chirongwa chezvekutengeserana cheAir Canada chinogona kuchinjika sezvazvinodiwa zvichibva pane iyo COVID-19 trajectory uye zvirambidzo zvehurumende.
Yakawanda yakazara Canada-US yekuyambuka-muganho purogiramu inotsigira hupfumi hwenyika dzese.
Chirongwa cheAir Canada chirimo chirimo chinosanganisira nzira makumi mashanu neshanu nenzvimbo makumi matatu nematanhatu muUS
Air Canada App inogonesa vatengi kunyatso tarisa, kurodha uye kusimbisa COVID-19 bvunzo mhinduro dzakakwidziridzwa kune dzendege dzese kubva kuUS kuenda kuCanada.
Air Canada nhasi yazivisa yazvino chirimo chekuyambuka-muganho purogiramu inosanganisira makumi mashanu nemashanu nzira nenzvimbo makumi matatu nematanhatu muUS, pamwe nendege dzinosvika mazana maviri nemakumi mairi pakati peUS neCanada. Iyi purogiramu nyowani inopindirana nekusunungurwa kwezvirambidzo pakufamba pakati penyika mbiri kubva munaAugust 55, 34, zvichigonesa vakazara vakatemerwa maAmerican kupinda muCanada kweasina kukosha kufamba uye kubviswa kwevanoda hotera zvinodiwa, vakasununguka kuyedza zvinodiwa kubvumira maCanada kutora pfupi kuyambuka-muganho nzendo kwemaisingasviki maawa makumi manomwe nemaviri kuti vaite kwavo pre-kupinda bvunzo muCanada, pakati pezvimwe matanho ekurerutsa zvirambidzo.
“Kurerutswa kwezvirambidzo zvekufamba zvakaziviswa nhasi nehurumende yemubatanidzwa idanho rakakosha rinobva pasainzi, uye tinofara zvikuru kuvaka patsva network yedu yeCanada neUS. Canada neUnited States vanogovana hukama hwepedyo uye kudzorera kubatana kwemhepo kunobatsira mukugadzirisa hupfumi hwenyika dzese. Air Canadatsika inodada yekuve mutakuri wekune dzimwe nyika muUS inoratidzwa mune yedu purogiramu yakagadziridzwa kupa dzakasiyana siyana sarudzo kune vatengi munyika mbiri idzi, kukumbira vatengi veCanada vanofarira kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa dzeUS, uye kuUS vagari vachitarisa kushanyira nekuongorora zvinoshamisa zveCanada nekugamuchira vaeni. Yedu purogiramu zvakare inogonesa nyore kuenda kumberi kufamba kuburikidza neyedu Toronto, Vancouver neMontreal hubs kuenda nekubva kunzvimbo dzenyika dzese. Tiri kuronga kudzoreredza masevhisi kunzvimbo dzese makumi mashanu nenomwe dzekuUS dzakamboshandirwa sezvinobvumirwa nemamiriro ezvinhu. Tinotarisira nemoyo wese kugashira vatengi vedu vari muchikepe, "akadaro Mark Galardo, Mutevedzeri Wemutungamiriri, Network Planning uye Revenue Management kuAir Canada.
"Tinofara nechiziviso ichi uye tinotarisira kugamuchira vafambi vanodzoka kubva kuUS," akadaro Marsha Walden, Mutungamiri uye CEO weDesination Canada. “Kubva kumaguta edu akasvinura akanyudzwa muzvisikwa kuenda kurenje rinoshamisa uye kumahombekombe egungwa kusvika kumusiyano wakasarudzika wemagariro eVanhu vepasi rose, zuva rega rega muCanada rinopa mukana mutsva uye mukana wekubatana zvakare nezvakakosha. Team Canada yakagadzirira kugamuchira shamwari dzedu dzekuAmerica! ”
Nyowani yedhijitari mhinduro kuburikidza neAir Canada App inorerutsa COVID-19 inoenderana gwaro zvinodiwa
Air Canada yakagadzira mhinduro nyowani yedhijitari kuburikidza neAir Canada App, ichigonesa vatengi vanobhururuka kubva kuUS kuenda kuCanada uye pakati peCanada uye sarudza nzvimbo dzekuEurope kuti dzive nyore uye zvakachengeteka tarisa uye kurodha mapoinzi eECVID-19 bvunzo yekusimbisa kutevedzera zvinodiwa nehurumende zvekufamba zvisati zvaitika. achisvika panhandare yendege.